Gudoomiyaha cusub ee xisbiga Social demokraterna | Somaliska
Xisbiga Social Demokraterna ayaa magacaabay gudoomiye cusub ka dib markii ay xilka ka degtay gudoomiyihii hore Mona Sahlin. Gudoomiyaha cusub ee Xisbiga oo lagu magacaabo Håkan Juholt ayaa shalay loo xaqiijiyay in uu noqdo gudoomiyaha xisbiga oo uu ku hogaamiyo xisbiga guul doorashada soo socota ka dib fashilkii ka soo gaaray doorashadii September 2010. Juholt waa 48 sano jir xubin ka ahaa baarlamaanka Sweden mudo 15 sano asagoo aan horey u soo qaban xil sare sida wasiir. Xilkiisii ugu sareeyay waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha difaaca ee baarlamaanka. Kongereska Xisbiga ayaa la filayaa in uu sidoo kale ku dhawaaqo Xog haye cusub oo uu yeesho Xisbiga. Social Demokraterna ayaa ahaa xisbiga ugu weyn Sweden mudo badan iyagoo hada ay booskaas kale wareegeen xisbiga hada talada haya ee Moderatka. Mona Sahlin ayaa talada xisbiga haysay mudo 4 sano ah ayadoo ka dib fashilkii doorashada ku dhawaaqday in ay iska casileyso gudoomiyanimada. Waxa ay baarlamaanka Sweden soo gashay markii ugu horeysay sanadkii 1985.
Xisbiga Social Demokraterna ayaa magacaabay gudoomiye cusub ka dib markii ay xilka ka degtay gudoomiyihii hore Mona Sahlin. Gudoomiyaha cusub ee Xisbiga oo lagu magacaabo Håkan Juholt ayaa shalay loo xaqiijiyay in uu noqdo gudoomiyaha xisbiga oo uu ku hogaamiyo xisbiga guul doorashada soo socota ka dib fashilkii ka soo gaaray doorashadii September 2010.
Juholt waa 48 sano jir xubin ka ahaa baarlamaanka Sweden mudo 15 sano asagoo aan horey u soo qaban xil sare sida wasiir. Xilkiisii ugu sareeyay waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha difaaca ee baarlamaanka.
Kongereska Xisbiga ayaa la filayaa in uu sidoo kale ku dhawaaqo Xog haye cusub oo uu yeesho Xisbiga. Social Demokraterna ayaa ahaa xisbiga ugu weyn Sweden mudo badan iyagoo hada ay booskaas kale wareegeen xisbiga hada talada haya ee Moderatka.
Mona Sahlin ayaa talada xisbiga haysay mudo 4 sano ah ayadoo ka dib fashilkii doorashada ku dhawaaqday in ay iska casileyso gudoomiyanimada. Waxa ay baarlamaanka Sweden soo gashay markii ugu horeysay sanadkii 1985.